သင်၏ရလဒ်များကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နည်းဗျူဟာ ၁၀ ခုရှိပါသည် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 11, 2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 11, 2017 Douglas Karr
ငါ Indianaapolis ကိုအိမ်ပြန် ဦး တည် Minneapolis လေဆိပ်ရှိဆိုင်ခန်းတစ်ခုတွင်ထိုင်နေသည်။ ကိုယ့်မှာအဓိကပြောနေတာလုပ်နေတာလက်စသတ် သဘောတရား ကြောင်းအသေးစိတ် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ခရီး ငါနှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစပြု Worksheet။ ဒီအချက်အလက်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမိတ္တူတစ်စောင်ကိုယူလိုက်ပါ။ အဲဒါကသင့်ကိုကူညီသင့်တယ်။
နောက်ကျောပုံပြင်။ ငါသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Dell တွင် Austin ၌ရှိခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းများကို podcasting အကြောင်းတင်ပြခြင်း၊ အိမ်ပြန်ခြင်းနှင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်တောင်ဒါကိုတာသို့ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါနင်းနယ်နေတဲ့ဖနောင့်ကိုပြုစုနေတယ်။ ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်တာတွေအားလုံးကငါ့ကိုပါသုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အရာအားလုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဒါကိုတာကိုကျွန်တော်ဆင်းသက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Korena Keys တွေရဲ့ အဓိကမီဒီယာဖြေရှင်းနည်းများ ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆိုဒ်များကိုပြသခြင်းအားဖြင့် Black Hills ကိုလှည့်ပတ်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဘေးထွက်မှတ်စု - ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သွားဖူးသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကောင်းဆုံး ဦး တည်ရာဖြစ်သည်။
စပျစ်ရည်ကိုမြည်းစမ်းဖို့တောင်ပေါ်ကိုငါတို့ကားမောင်းလာတဲ့အခါနှင်းများစတင်ကျလာတယ်။ ဒီနေရာမှာဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာအလွှာမဟုတ် ... ကယ့်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာလုံးဝလှပတဲ့ ... ဒါပေမယ့်ပြproblemနာတစ်ခုတည်းရှိခဲ့သည်။
ငါထုပ်ပိုးပြီးစီစဉ်ရတာအရမ်းအလုပ်များလွန်းလို့ကျွန်တော့်ကိုဆွယ်တာအင်္ကျီတစ်ထည်၊ ငါဘာတွေတွေးနေလဲမသိဘူး ဘယ်သူကအင်္ကျီတောင်မထုပ်ဘဲအောက်တိုဘာလမှာတောင်ကိုသွားသလဲ။ (ငါ!)
ငါ့အမှတ်လား အချိန်သည်ပျံသန်းနေပြီးသင့်အားလပ်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုစတင်စီစဉ်ရန်အချိန်ကျပြီ။ MDG Advertising မှဤအချက်အလက်သည်အလွန်ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် 10 အဘို့အ Essential အားလပ်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ 2017.
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အားလပ်ရက်နှင့်သက်ဆိုင်သောရောင်းအားသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၉၂၃ ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထိုနံပါတ်သည်အမြတ်အစွန်းရူပါရုံကိုသင်၏ ဦး ခေါင်း၌မြင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲမှုပိုမိုသုံးစွဲခြင်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်စားသုံးသူများအားဖြတ်သန်းရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများပိုမိုများပြားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ MDG ကြော်ငြာခြင်း
10 အဘို့အ Essential အားလပ်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ 2017
စတင် စောစော နှင့်အဆုံးသတ် နောက်ကျ
ပေး စိတ်ဝင်စားခြင်း ချန်နယ်တစ်လျှောက်
အာရုံစိုက် လူမှုမီဒီယာ အငယ်စားစားသုံးသူများရောက်ရှိရန်
ထက်ပို။ ပူဇော် အထူးလျှော့စျေး
Make ပြန်ပို့ခြင်း အလွန်လွယ်ကူသော
Tags: Amazonရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားခြင်းအထူးလျှော့စျေးအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းအားလပ်ရက်များအားလပ်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာမိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးmsg ကြော်ငြာpersonalizationပြန်လူမှုမီဒီယာ
17:2017 pm မှာအောက်တိုဘာ 2, 50
သင်ဤ off off ရာသီအတွင်းဤနည်းဗျူဟာအချို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
27:2017 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 21
လုံးဝ Filip! ငါထင်တာကပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးတိကျသေချာတဲ့စာတိုပေးပို့မှုတွေဟာပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဖွင့်၊ နှင့်အညီ, omni-channel ကိုညှိနှိုင်းအမြဲတမ်းအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။